မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Blog Day 2014: I love All my Readers
Posted by mabaydar at 6:10 PM
တစ်ယောက်ယောက်များ ကျန်သွားလေသလားလုို့... အာ့ လာပြောတား)
9/01/2014 7:20 PM
Comment ရေးနေကျသူမို့ တမင် မေ့ကျန်ပြီး ကွန်မန့်မှာ လာဆူမှာ မျှော်နေတာ... ခွိ ခွိ...
9/01/2014 7:26 PM
ဒါနဲ့ ကိုရီးယား ခရီးသွား ပိုစ့်တွေအပြင် တခြား ပိုစ့်တွေ ကြိုက်တာရှိသေးလား... ? Korea က နယ်ခံတွေ ဖတ်နေတော့ မဟုတ်တာတွေ ရေးမိရင်လဲ သည်းခံဖတ်နော်... :P
9/01/2014 7:28 PM
I only visited your blog for those trip posts only. it really useful. :)
long time no check your blog already (beside those trip posts) and i know you don't mind :P
and thanks for putting my name there.
P.S: As you may notice, I already stop my blog and switch to wordpress.
အစ်ကိုနဲ့ ဟိုးးးးးး အရင်ကတော့ ဘလော့ပေါ်မှာ အဆက်အသွယ် ရှိတယ်.. ဒါပေမဲ့ မဗေဒါကို မေ့နေပြီတောင် ထင်တာ... ဟဲ ဟဲ... :D
ပြောရရင်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့၂နှစ်လောက်ကတည်းက မဗေဒါကို ဘလော့ဂါ စစ်တယ်လို့ ကြိတ်ပြီး သတ်မှတ်ထားတား)))
ဘလော့တွေ စခေတ်စားတဲ့ အချိန်လောက်ကနေ ခုချိန်ထိ စွဲစွဲမြဲမြဲ ရေးနေနိုင်တာ လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ နောက် မဗေဒါ ရေးနေတာလဲ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့လိုင်း ဖြစ်နေတယ်။ အားပေးနေမယ်နော်
9/01/2014 8:14 PM
Are u in my facebook friendlist? Although I dont mind u write comment or not, honestly I felt disconnected with u. I thought u no longer read my blog. Thanks for ur comment in this post...
9/01/2014 8:18 PM
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ မဗေဒါရေ။ စိတ်ထဲမှာ တကယ်ပဲ ဝမ်းသာတယ်။ blog post ထဲ မှာ shin နာမယ်ပါတာ မဗေဒါ blog မှာ ပထမဆုံးပါပဲ။ ကိုယ် ဟိုးအရင် ၂၀၀၈(ထင်တယ်) ဘလော့တွေ စခေတ်စား ကထဲက blog ဖတ်ဖြစ်တယ်။ အရင်က အမြဲသွားဖတ်ဖြစ်နေတဲ့ blog တွေက မ နိုင်း နိုင်းစနေ။ ကို ဒီကိုလာ(သူ့ Blog အဟောင်း TZA)။ မဗေဒါ,wesheme, blog တွေက ကိုယ်အမြဲ သွားကြည့် နေကျ တွေပေါ့။ အခုတော့ တခြား blog တော်တော်များများက မရေးတော့ ပေမဲ့ မဗေဒါကတော့ ရေးနေတုန်းပဲ။ ကိုယ့် အမေကတော့ blogger တွေဆက်မရေးတော့ရင် သူကနှမျောနေတာ။ သူက စာဖတ်ရတာ ဝါသနာပါတယ်လေ။ အမှန်ပြောရရင် ကိုယ် အရင်ထဲက blog တွေ တော်တော်များများကို လိုက်ဖတ်ဖြစ် ပေမဲ့ comment မရေးသလောက်ပါပဲ။ comment ရေးရတာ stress နဲနဲရှိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဟိုးအရင် ကိုဒီကိုလာရဲ့ blog က လူတော် ထိုင်ဝမ် တရုတ်တယောက်အကြောင်း ရေးထားတဲ့ post တခုမှာ ဒီလူ ဗလကျင့်ထားတဲ့ ဘော်ဒီ မိုက်တဲ့ အကြောင်း english လို လေး တကြောင်းရေးမိတာblogger မခင်ဦးမေ(သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ မသိပါ)က ဘော်ဒီအကြောင်းမှ ရွေးပြီး comment ရသလား လို့ လူကို အသားလွှတ် လာဟောက်တာခံရဖူးပြီး ကထဲ က ကိုယ် comment ရေးတာ အတော် သတိထားသွားတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ comment ကို ဒီကိုလာရဲ့ chat box မှာလဲ လုပ်ပြီး ဒီလို မရေးသင့်ပါဘာညာနဲ့ ထပ်ပြောတာခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ အဲ့တုန်း ကပြေရာ ပြေကြောင်း ပြောလိုက်ပေမဲ့ ကိုယ်အတော်ရှက်သွားတာတော့ အမှန်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ မဗေဒါ blog posts မှာ comment ရတာတော့ ကိုယ်ကြိုက်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မဗေဒါရေးတဲ့ style က ပွင့်လင်းပြီး ကိုယ်မကြိုက်လဲ မကြိုက်တဲ့ အကြောင်း တလွှဲဖြစ်လဲဖြစ်တဲ့ အကြောင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရေးထားတော့ ကိုယ်လဲ comment ရတာ လွတ်လတ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ ဒါနဲ့ စကား မစပ် ကိုယ့် mother က blog post တွေကို သူ internet မသုံးတတ်ခင် ဟိုးအရင် ကထဲက ဖတ်ဖူးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်က ရီရတဲ့ post တွေ ဗဟုသုတရှိတယ်ထင်တဲ့ post တွေကို Microsoft word ထဲမှာစုထားပြီးတော့ ကိုယ်မြန်မာပြည်ပြန်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူကြုံရှိရင် ဖြစ်ဖြစ် print ထုတ်ပြီး ယူယူသွားတတ်လို့ပါ။ Blog post ရဲ့ ခေါင်းစဉ်ဘေးနားမှာတော့ ဒီဟာက ဘယ် blog ကယူလာတယ်ဆိုပြီး တော့ထဲ့ ပါတယ်။ Blogger ကို credit ပေးတဲ့ သဘောပါ။ မဗေဒါရဲ့ O$P$ post ဆိုရင် အမေက သဘောကျပြီး ခန ခနပြောပါတယ်။ ရီရတယ်တဲ့။ Singapore ရဲ့ style ကိုလဲ သိရတယ်တဲ့။
9/01/2014 9:51 PM
Movie Reviews :)
9/01/2014 9:57 PM
စင်္ကာပူရောက်အလွဲများဖတ်ပြီး ဗေဗေ့ဘလော့ကိုရောက်လာတာ...။ ဒီဘလော့က သန့်ရဲ့ ဖေးဘရိတ်ဘလော့ထဲပါတယ်...။ အရင်တုန်းက ခရီးသွားပိုစ့်တွေဖတ်ပြီး အားကျတယ်။ အခုတော့ မရောက်ဖူးသေးတဲ့နိုင်ငံတွေကို DIY သွားဖို့အထိ သန့်ကို အားအင်တွေပေးတယ်... ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ကြုံတုန်းပြောပါရစေ...။ ကိုရီးယားဒရမ်မာ review တွေလဲ သိပ်ကြိုက်စ်...။
နာ့နာမည်ပါလို့လဲ သိပ်ကြိုက်စ်... ဟိဟိ..။
9/01/2014 10:02 PM
စကာင်္ပူရောက်အလွဲများ နဲ့ ခရီးသွား post တွေ ဒိုင်ခံအားပေးလျှက်ပါ.. :D
9/01/2014 10:27 PM
ဂယ်ကြီးလား... facebook မှာ Like လုပ်တာတော့ တွေ့တယ်... ဒီမှာ ခြေရာမချန်တော့ မဖတ်ဘူးပဲ ထင်နေတာ... :D
9/01/2014 10:35 PM
NNC က နွေဒနေခြည်လား.... အားပေးနေတာကို ဒီကလဲ ကျေးဇူးတွေ ကြိတ်တင်နေတာ... ဆက်လက်အားပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်.... ဟဲ ဟဲ
မဗေဒါလဲ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်ရေးတာကို ဇဝေဇ၀ါနဲ့ မှားများ မှားသွားလားဆိုတာမျိုး တွေးတတ်ပါတယ်... အဲလိုတွေးရင်နဲ့ မရေးဖြစ်တဲ့ ပိုစ့်များစွာလဲ ရှိပါတယ်... ကိုယ်ရေးတာကို လာပြီး ထိခိုက်ဝေဖန်ရင်တော့ ကိုယ့်ဘက်က ကိုယ်သဘောထားကို သေသေချာချာ ရှင်းပြမယ်... အဲ့ဒါမှ လက်မခံရင်တော့ မတတ်နိုင်ဘူးလေ... အင်း ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က အမှတ်မဲ့ရေးလိုက်လို့ အဓိပ္ပါယ် ကောက် လွဲနိုင်မဲ့ ဟာမျိုးကျတော့... ကိုယ့်အတွေး တကယ်မှားနေတာမျိုးဆိုရင်တော့ ၀န်ခံရင် ၀န်ခံလိုက်တယ်... မဟုတ်လဲ ရေးထားတာကို ပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်... ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အမြင်မတူတာကို Personal attack လိုပြောလာရင်တော့ တစ်ခါရှင်းပြမယ် ပြီးရင်တော့ သူထင်ချင်သလို ထင်ါပစေတော့ပေါ့... ဥပမာ ကိုယ်အရက်မသောက်တိုင်း အရက်သောက်တဲ့ မိန်းမတွေက မကောင်းတဲ့ မိန်းမတွေလို သတ်မှတ် ပုတ်ခတ်တဲ့သူရှိသလို... အရက်သောက်ပြီး ပျော်တတ်တဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာကျတော့လဲ အရက်မသောက်တဲ့သူကို လူရာမသွင်းချင်ပြန်ဘူး... (လူဆိုတာ ကိုယ့်အကြိုက် ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်ပဲ... မှားတယ်မှန်တယ် ဆိုပြီး ရတိပြတ်ဆုံးဖြတ်ရခက်တယ်... ) မဗေဒါ ဘလော့မှာတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးလို့ရပါတယ်... မဗေဒါနဲ့ အမြင်မတူတော့လဲ ငြင်းခုန်လို့ရပါတယ်... မဗေဒါနဲ့ ခင်တဲ့သူတွေဆို မဗေဒါနဲ့ ငြင်းရလွန်းလို့ အကြောင်းသိနေပြီ... ပြီးလဲ စိတ်ထဲမထားပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပေါ့...
ဟယ် အဲလိုရေးလို့ ဒီကလဲကြည်တွေနူးပြီး မျက်ရည်ဝဲပါတယ် အဟုတ် .. အမြဲဖတ်တာကတော့ မဗေဒါစာတွေဖတ်တိုင်း ကိုယ်နဲ့ relate လုပ်လို့ရတယ် ကိုယ်အညင်ကတ်တာ စိတ်ပျက်တာ အားရတာ သဘောကျတာတွေကို ကိစ္စတိုင်းမှာပေါ့နော် မဗေဒါက ကိုယ်နဲ့ agree ဖြစ်တာများတယ် ကိုယ့်အစားဝင်ပြောပေးနေသလားတောင်ထင်ရတယ် တခါတခါဖတ်ရင်းနဲ အမလေး ဟုတ်ပါ့ဟယ် ဆိုပြီးလက်ခုပ်လက်ဝါးတောင်တီးယူရတယ် တကယ် စိတ်ထဲရှိတာ မြင်တာကို ရိုးသားစွာပြောရဲယုံမကဘူး အကွက်စေ့စေ့ကိုမြင်တတ်လေ့လာတတ် ပြီးတော့ လူနားလည်အောင်သေချာကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ပြောပြရေးပြနိုင်လို့ ဖတ်ရတာအားရတယ်.. အမြင်ကျယ်ပြီး intelligent ဖြစ်တဲ့စာရေးသူလို့လဲထင်တယ် ဆက်ရေးပါ တကယ်ဆို ဝိုင်းကဘလော့ရေးဖူးတယ် ၃နှစ်လောက်တော့ရေးလိုက်တယ် မဗေဒါသိမယ်မထင်ဘူး တခြားနာမည်တခုနဲ့ black ကြီးတို့နဲ့တော့တော်တော်ခင်တယ် ဝတ္ထုအက်ဆေးတွေရေးတဲ့ဘလော့ပါပဲ နောက်တော့ အမျိုးသားက မကြိုက်လို့မရေးတော့တာ .. အဲ့အချိန်ထဲက မဗေဒါရေးဟန်မျိုး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရေးချင်ခဲ့တယ် အဲလောက် courage လဲမရှိခဲ့ဘူး မဗေဒါဘလော့ကိုထာဝစဉ်စီးဆင်းနေသော သွက်လက်တဲ့ အရေးအသားနဲ့ စာဖတ်သူအပေါ် ရိုးသားစွာ အလေးထားစေတနာထားရေးသားတတ်လို့ အရမ်းကိုသံယောဇဉ်ဖြစ်မိပါတယ်
9/02/2014 2:09 AM
what is ur new wordpress address?
9/02/2014 8:11 AM
ူLotus Phyu said...
blog day မှာ blogger တွေအမှတ်တရအနေနဲ့ပို့ စ်တွေတင်ကြတယ် ဘယ်မှာမှလိုက်မဖတ်ရသေးဘူး
ခုလို blog readers တွေကို တကူးတက အမှတ်တရ ကျေးဇူးတင်တဲ့ ပို့ စ်ကို blog day မှာရေးပေးတဲ့ မဗေဒါကို လေးစားပါတယ်
မဗေဒါရဲ့ ဘလော့ကို ဘယ်တုန်းကစဖတ်မိလဲတော့မမှတ်မိဘူး ဒါပေမဲ့မှတ်မိတာကတော့ " လှိုင်းတစ်ပိုးထန်... လေကိုဆန်လဲ... အပြုံးမပျက်... ပန်းပန်လျက်..." ဆိုတာနဲ့ စမှတ်မိလာခဲ့တာ နောက်ပိုင်း ခရေးသွားပို့ စ်တွေကို ဖတ်ရတာ သဘောကျလာတယ် ကိုယ်အတွက် အတော်အသုံးဝင်တယ် အထိက ကတော့ အသေးစိပ် visa process စတာကအစရေးပေးထားတယ် ၂၀၀၆ ၂၀၀၇ မှာ Chat room တွေမှာအချိန်ကုန်တယ် ၂၀၀၈ ၂၀၀၉ လောက်ကစ ဘလော့တွေလိုက်ဖတ်တယ် တစ်နေ့ ဘလော့မဖတ်လိုက်ရရင် ဟတာတာနဲ့ မပြီးပြည့်စုံသလိုကိုခံစားရတယ် ကွန်မန့် တော့ ရေးခဲတယ် နောက်ပိုင်း ဖေဘွတ်ခောတ်ရောက်လာတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဘလော့ဂါတွေကို လိုက်အက်တယ် အဲသလိုနဲ့ မဗေဒါနဲ့ လဲ fb မှာနေ့ တိုင်းမြင် ပိုရင်းနှီးသလိုခံစားလာရတယ် :D ဒီဘလော့ဒေးမှစ ဆက်လက်ပြီး ဘလော့ကင်းနိုင်ပါစေ ကောင်းသောခရီးတွေများများထွက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
အဲ့တုန်းက အမှတ်တမဲ့နဲ့ comment ရေးလိုက်တာတော့ အမှန်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဗလကျင့်ထားတဲ့ ဘော်ဒီ မိုက်တယ်လို့ ပြောတာကို မှားတယ်လို့တော့ အခုထိ ကိုယ်မထင်ပါဘူး။ (ဘလော့ကာ ရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာထဲက ကိုယ် comment ချင်တာ comment ခွင့် ရှိတယ်လို့ ကိုယ်ထင်တာပဲ၊ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ဆဲတာလဲမဟုတ်) ဒါပေမဲ့ အဲ့တုန်းက မခင်ဦးမေနဲ့ လဲ သေချာပြန်သွား မပြောဖြစ်ဘူး။ ကိုယ်က မြန်မာစာ မရိုက်တတ်သေးတာရော၊ ကိုယ့်လို ရိုးရိုးစာဖတ်တဲ့ သာမန်လူတယောက်ကို online က လူတွေသိပ် သတိထားမိသွားတာ မလိုချင် တာ ကြောင့် သွားပြီး သူနဲ့ ပြန်မငြင်းခဲ့ဘူး။ ပြီးတော့ ကို ဒီကိုလာ ဘလော့မှာ ဆိုတော့ ဘလော့ ပိုင်ရှင် အနှောက်အရှက်ဖြစ်မှာ စိုးတာလဲပါတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ရိုးရိုးစာဖတ်သူ အနေနဲ့ comment ရေး ချင်လဲ သတိထားမှ လို့တော့ ဆင်ချင်လိုက်တယ်။
9/02/2014 4:34 PM
သဘောပေါက်တယ် Shin ခံစားရတာကို... တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်လဲ အဲ့လို ပြောခံရရင် confident ပါပျောက်တယ်... ကိုယ်ကလဲ သေချာ မစဉ်းစားပဲ ရေးလိုက်တာဆိုတော့ ကိုယ်ပဲမှားသလားလို့ ဒွိဟဖြစ်တတ်တယ်... ဒါပေမဲ့ ကိုယ်မမှားတာလဲ သေချာတယ်... ပြဿနာလဲ ထပ်မတက်ချင်ဘူး... အဲလိုနဲ့ နောက်ဆို မရေးတာပဲကောင်းပါတယ်လို့ ဖြစ်သွားရော...
9/02/2014 6:39 PM
Yes, I'm in your FB friend list.
I also like your စင်္ကာပူရောက်အလွဲများ posts (beside trip related posts).
I sometime check your new FB posts but most of them are K-Drama related so I just skip those posts cuz I'm not so into this 'Korea thing'.
Thanks for asking and giving meachance to show you my link on this post >> http://dslrstranger.wordpress.com/
9/02/2014 8:54 PM
What is your Facebook name? PM me pls... :D
9/02/2014 9:23 PM